I-Hideaway e-Woodlands New Forest ilinde wena. - I-Airbnb
I-Hideaway e-Woodlands New Forest ilinde wena.
Thatha kalula kule ndlela yokubalekela eyingqayizivele nenokuthula. Indawo yokuhlala iphethwe yimina nomndeni wami. Kukhona ukufinyelela okulula kakhulu kwe-New Forest (ngaphesheya komgwaqo), ukuhamba okungenamkhawulo, ukuhamba ngebhayisikili, amapikiniki nokuhlola okuvamile. Izeluleko eziningi noma isiqondiso singanikezwa mayelana nokuhamba nokugibela kwendawo.
Indawo yokuhlala iyi-annexe ehlomele kahle futhi ekhanyayo yendlu enkulu ebekwe engadini evuthiwe futhi enomhlaba omuhle.
Kunomnyango wangaphambili owabelwene ngawo kanye nendlela yasevulandi. Ngemuva komnyango wakho wokungena okhiyekayo kunekhishi nendawo yokudlela ekhuphukela endaweni yokuhlala enosofa, i-TV namashalofu. Igumbi lokulala lingaphandle kwendawo yokuhlala enombhede wabantu ababili, amatafula asemaceleni, izibani zokuthintwa kanye negumbi lokugeza langasese.
Indawo yokuhlala ibekwe engadini enkulu eduze komgwaqo wokuhlala onamaqabunga ngaphakathi kwendawo yegridi yezinkomo yeNew Forest National Park. Amaponi Amahlathi Amasha, izilwane eziklabile, izinyamazane ezifuyiwe kanye nezilwane zasendle zizulazula ngaphandle kwemingcele. Okungcono kakhulu kwemihlaba yomibili kusesangweni. Phuma ungene otshanini obukhulu behlathi Elisha elizungezwe izihlahla ze-oki zasendulo futhi uhambe ngokukhululeka kuzo zonke izinhlangothi. Noma landela umgwaqo ukuze ufinyelele kwezinye izindawo zehlathi Elisha, ama-Ornamental Drives, kanye namadolobhana amancane namadolobhana akulelikhona le-Hampshire. Indawo yokudlela yasekhishini edumile, iSpot in the Woods, iqhele ngamamayela angu-1/4. Kukhona indawo yokuphuzela utshwala (i-Game Keeper) engaphansi kwemayela elingu-1 namanye ama-pub amathathu e-Ashurst. Futhi e-Ashurst kukhona i-CoOp enkulu, i-cafe kanye nezindawo zokuthenga ezintathu.